$36.90 tax excl.
ကုန်ကျစရိတ်: 37 coins
 အမြင့်နှုန်း ၊ အမြန်နှုန်း ၊ ရှည်လျားသောအကွာအဝေး
နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
 (ICR),AWB,AGC,BLC,2D-DNR စနစ်ဖြင့်
နေ့ နှင့် ည မှတ်တမ်းယူနိုင်ခြင်း။
 3.6 မီလီမီတာ အတိမှန်ဘီလူး ပါဝင်ဖြင့်6မီလီမီတာ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း။
 1/2.7"2 Megapixel CMOS
 25 / 30 fps @ 1080P,IP 66
 အမြင့်နှုန်း ၊ အမြန်နှုန်း ၊ ရှည်လျားသောအကွာအဝေး နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
 (ICR),AWB,AGC,BLC,2D-DNR စနစ်ဖြင့် နေ့ နှင့် ည မှတ်တမ်းယူနိုင်ခြင်း။
 3.6 မီလီမီတာ အထိမှန်ဘီလူး ပါဝင်သဖြင့်6မီလီမီတာ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း။
 IR LED မီးသီးအရှည် 50 မီတာ ပါရှိခြင်း။
 DC 12V ပါဝင်ခြင်း
Mini. Illumination [email protected](AGC ON), 0Lux IR on
Angle of View H 89.9º